I-Huajing grade grade phlogopite ivela e-Inner Mongolia naseXinjiang. Umkhiqizo ikakhulukazi ulungele ukugcotshwa okusindayo okusindayo, okungathola imiphumela emihle emapayipini kawoyela, upende we-marin, ukugcotshwa kwemoto chassis, nezinto zokwakha zensimbi ezisogwini anticorrosion.Ngaphezu kwalokho, emkhakheni wezingubo zokushisa eziphakeme kakhulu, ungazivumelanisa endaweni ekhethekile yokumboza yokushisa okuphezulu nengcindezi kusukela ku-phlogopite izici ezinhle kakhulu zokwakheka.
I-Phlogopite, i-Heavy Antisepsis, i-Insulation, i-Paint yasolwandle
Enemthombo Ibanga Phlogopite
I-Huajing grade grade phlogopite ivela e-Inner Mongolia naseXinjiang. Umkhiqizo ikakhulukazi ulungele ukugcotshwa okusindayo okusindayo, okungathola imiphumela emihle emapayipini kawoyela, upende we-marin, ukugcotshwa kwemoto chassis, nezinto zokwakha zensimbi ezisogwini anticorrosion.Ngaphezu kwalokho, emkhakheni wezingubo zokushisa eziphakeme kakhulu, ungazivumelanisa endaweni ekhethekile yokumboza yokushisa okuphezulu nengcindezi kusukela ku-phlogopite izici ezinhle kakhulu zokwakheka. I-Phlogopite isetshenziswa kakhulu ekugqokeni, izinhlaka nezinhlaka zepulasitiki, injoloba njalonjalo, ukuze kuthuthukiswe izakhiwo zazo zomzimba nezomshini, ukubambezela ilangabi, ukwahlukanisa, isicwebezelisi nezinye izici zokusebenza ekusetshenzisweni kwenjoloba, okwamanje ucwaningo lwasekhaya ikakhulu igxile ekuthuthukiseni ukuqina komoya wenjoloba, izakhiwo zomzimba nezomshini, ukusebenza kwe-insulation kanye nokumuncwa kokushaqeka nokusebenza komsindo.
I-Phlogopite ine-insulation ephezulu nokumelana, izindleko eziphansi ze-electrolyte, ukumelana ne-arc ne-corona kanye nanoma yikuphi okunye ukuchuma kwe-dielectric .Ngokuya ngePhysicochemical Properties, ukuqina okuphelele, amandla aphezulu wokukhanda, ukuqina kanye ne-acid ne-alkali-resistance.
ukwenza izinto obala
Ukwengezwa kwe-mica powder ngopende abakhulu kungathatha indawo ye-zinc powder, i-aluminium powder, i-magnesium powder ne-titanium powder. I-Mica powder isetshenziswe kabanzi ezitshalweni zokumboza ezifuywayo ngopende abalandelayo:
1. Ngopende ojwayelekile owenziwe ngopende kawoyela
2. Okwe-lactic acid nokunye ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze kusetshenziswe ngaphandle nopende womphakathi
3. Isetshenziselwa ukuthatha upende we-acid odongeni lwesinye, kufaka phakathi i-acrylic, i-butadiene emulsion, i-polyvinyl acetate emulsion, i-acrylic emulsion ne-polyvinyl acetate emulsion yepende langaphakathi lodonga.
Isetshenziselwa ukuvikela insimbi nokugcinwa kukapende: izimoto ezifuywayo, izithuthuthu, amabhayisikili, upende womkhumbi usetshenziswe kancane kancane ukunweba impilo yawo futhi unekhono lokuvikela elisobala, uthuthukise ubushelelezi nombala wombala wopende.
Langaphambilini I-mica powder eyomile